अमेरिकी राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रम्प एसियाली मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनले जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीनको भ्रमणा गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले उत्तर कोरियालार्इ संयमता अपनाउन नभए परिणाम भोग्न समेत चेतावनी समते दिएका छन् । ट्रम्पले यसो भनिरहँदा उत्तर भने थप क्षेप्यात्र परिक्षणको तयारीमा भएको हुनसक्ने शंकाहरू व्यक्त गरिएको छ ।
उत्तर कोरिया बारे अरू देश वेखबर जस्तै छन् । कति हतियार छन्, के गर्दै छ उत्तर जस्ता प्रश्नको जवाफ पाउन त्यति सहज छैन ।
दशकौंदेखि उत्तर कोरियाली समाज विश्वबाट टाढा रहेको छ र रहस्यमयी समाजको रुपमा रहेको छ ।
मानिस यसलाई ‘हर्मिट रेन’ या अलग रहनेवाला शासनकाल भन्छन् र त्यहाँका नेतालाई अबुझको रुपमा लिने गरेका छन् ।
जबकी उत्तर कोरिया भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वका लागि आजको सवैभन्दा ठूलो खतरा भन्दै आएको छ ।
परमाणू शक्ति बन्ने महत्वकांक्षा, नागरिकमाथि हुनेवाला दमन तगा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लागाइएको कडा प्रतिबन्धका कारण यसलाई ‘अछूत राज्यको रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
वास्तविकता यो हो की उत्तर कोरिया तथा यसका नेता किम वंशमाथि अमेरिकासमेत बाँकी विश्वको कुनै पनि असर परेको छैन ।
करीब साढे २ करोडको जनसंख्यावाला देश के कारण भयो त‘अछूत’ ?
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको उदय
१९०५ बाट नै कोरियाई प्रायद्वीपमाथि नियंत्रण रखने वाला जापानले द्वितीय विश्वयुद्धमा हारेपछि अमरीका र तत्कालीन सोभियत संघका बीच यस विषयमा सम्झौता भएको थियो कि दुवै देशको कव्जा हुने छ ।
प्योंगयाङमा बेलायतका पहिले राजदूत र वर्तमान विदेश सचिव जेम्स होएरका अनुसार
“प्रायद्वीपलाई बाडफाडका लागि अमेरिकाले नक्सामा एक रेखा खिचेको थियो जहाँबाट दुई देशको जन्म भएको थियो ।’
अमेरिका र रुसले दक्षिणी हिस्सा अमेरिकाले र उत्तरी हिस्सामाथि रुसले नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे ।
यससँगै किम–२ सुंग नेतृत्वमा उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट सरकार अस्तित्वमा आयो ।
तर अमरीका र सोभियत संघबीचमा बढेको तनावका कारण उत्तर तथा दक्षिण कोरियामा युद्धको भयो र दुवै देशबीचको तनावमा प¥यो ।
उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरियाबीच तनाव
त्यस समय अमरीकाले उत्तर कोरियाको पूरै आकाशमा कव्जा गरेको थिया र भारी बमबारी गरेको थियो जसकाकारण धेरैको ज्यान गएको थियो भने उत्तरले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । आज पनि कारियाका स्कुलमा यसविषयमा पढाइने गरिएको छ ।
दुई देशबीचको युद्धलाई त्यस सयमको दुई महाशक्तिका बीचको ‘प्रोक्सी वार’को रुपमा लिइएको थियो ।
तर दुई देशको एकीकरणको कुरा पनि भएको थियो तर केही नतिजा निस्केन । त्यसपछि दुई देशकाबीचमा युद्ध जस्तै अवस्थाको सिर्जना भयो ।
कोलंबिया विश्वविद्यालयका कोरिया रिसर्च सेन्टरसँग सम्बन्धित चाल्र्स आर्मस्ट्रङका अनुसार उत्तर कोरियाई समाज स्थायी रूपमै युद्धको मानसिकता वाला छ ।
युद्धपछि उत्तर कोरिया कसरी बाँचेको छ?
१९७० को दशक सम्म उसलाई चीन, सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशले आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
जापानी शासनको बीचमा यहाँ औद्योगिक विकास धेरै भएका थिए । यसका कारण दक्षिणको धेरै ज्यादा धनी क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय तनावका कारण कोरिया गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को सक्रिय सदस्य थियो । १९६० को दशकमा अन्तिममा उत्तर कोरिया को जीडीपी दक्षिण कोरियाको भन्दा धेरै थियो । १९७० का दशकमा यो अन्तर समाप्त भएको थियो ।
उत्तरमा उथलपुथल हुनमा के कारण छ?
जेम्स होएरे सोभियत संघको विघटन भयो र रूसले साथीहरुको लागि लगानी गर्ने समय सकिएको भन्यो ।
दोस्रो तर्फ चीन राज्य समर्थित पूजीवाद तर्फ अघि बढ्यो र उसले पनि उत्तर कोरियासँग माफी माग्यो ।
किम–२ सुंग को सरकारको समयबाट नै यहाँ तीन नीति । राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सैन्य स्वायत्तता ।
के परमाणु शक्ति बनाएकै कारण रिसाए अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति?
नब्बेको दशकमा उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम को संकेत मिलेको थियो । जसले विश्वको कान ठाडा भएका थिए ।
त्यस समय प्योंगयाङले एनपीटी (परमाणु अप्रसार) समझौतासँग आफूलाई अलग गर्दै आफूँगस परमाणु हथियार भएको घोषणा ग-यो ।
२००२ मा तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले उत्तर कोरियालाई नराम्रो देशको शीखर भनेका थिए ।
उत्तरलाई परमाणु कार्यक्रम त्याग्नका लागि उसलाई मनाउने प्रयास भएको थियो तर त्यसमा केही उपलव्धि हासिल भएन । उत्तरमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवन्धहरु लागे र देशको अर्थव्यवस्थाका लागि मुख्य कोइला निर्यातमा पनि रोक लगाइयो ।
जेम्स होएरका अनुसार, क्लिन्टन के कार्यकालमा उत्तर कोरियाको परमाणु अखडामा हमलाको रणनीतिमा विचार गरिएको थिया । तर त्यस समय यसबाट खतरा हुने भन्दै रोकिएको थियो ।
के उत्तर कोरियाले संकटको हल निकाल्न सक्ला?
वर्तमान उत्तर कोरियाई नेता किम जोन उनसँग वार्ता गर्न असम्भव छ किनकी उनलाई असझदारको रुपमा लिने गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रका अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले उनलाई यस्तो भनेका थिए । तर विशेषज्ञ यस भनाइमा सहमत छन् की आफ्नो सरक्षाका लागि परमाणु हतियार बनाउने प्रयास गर्नु असमझदार पक्कै होइनन् ।
सियोलमा योनसेई यूनिभर्सिटीका प्राध्यापकले बीबीसीसँग भन “किम जोङ उनसँग आफ्नो सुरक्षाका लागि कोही सहयोगी छैनन् जबकी उनको अगाडि आक्रामक महाशक्ति छन् जसले पूरै विश्वका केही स्वायत्त देशमाथि आक्रमण गरेका थिए ।
भारतको ‘अहङ्कारी’ अभिव्यक्तिबाट इमरान खान दुःखी, किन बिग्रियाे वार्ताकाे वातावरण ?
तीन नवजात शिशुमाथि चक्कु प्रहार
अस्पताल भर्ना भएकी ११ वर्षीय बालिका बलात्कृत
यसरी टुक्रिएका थिए दुई कोरिया